❤️ Ubonyusa njani abalandeli be-Instagram ngokuQinisekileyo : guqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram - Facebook
Instagram Automation News. Instagram Automation News : I-13% yabemi behlabathi bayayisebenzisa, kwaye i-80% yabo ilandela iinkampani.
Instagram Automation News,21% de uthanda, izabelo kunye nezimvo, U-Oberlo uthi ukubandakanyeka kwabathengi akuzange kube namandla. Idume ngokuphindwe kalishumi kunoFacebook, I-Pinterest kunye ne-Twitter kunye.
Ke ngoko, Iinkampani ezicinga phambili zijonge iindlela ezintsha zokuzibandakanya nabalandeli babo be-Instagram, nangona kunzima. Ukukunceda ukuba ufumane okuninzi kumanyathelo akho entengiso ephilayo kunye nehlawulelwayo ngelixa ugcina amaqhinga akho entengiso ye-Instagram ixesha elide., siqulunqe olu luhlu luluncedo lwezindululo ezingama-23. Lixesha lokuqalisa imibhiyozo.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Ihlaziywe ngokuhambelanayo.
Iimveliso kufuneka zisebenze ukuba zifuna ukufumana abalandeli abatsha kunye nokwandisa ukuzibandakanya, kodwa kufuneka basebenze kangakanani ? Uphononongo lubonisa ukuba isithuba esinye okanye ezimbini ngosuku zifanelekile.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Kunokuba ndishumayele, yabelana ngamabali.
Intengiso yoRhwebo kwi-Instagram ayihoyi indima ye-Instagram njenge”isixhobo sempembelelo yegraphic”, nto leyo eyayiyilelwe yona. Endaweni yokushumayela nje umyalezo wokuthengisa kubathengi bakho, sebenzisa imifanekiso, iividiyo kunye nesicatshulwa ukubatsala.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Phuhlisa igama lebhrendi elaziwayo.
Amashishini azama ukonyusa iprofayile yawo kwi-Instagram kufuneka agxile kwizinto ezintathu eziphambili : ukungafihli, umahluko kunye nokungaguquguquki. Indlela ekhawulezileyo nengacwangciswanga ayiyi kuzisa umphumo olindelekileyo.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Gcina i-aesthetic engaguqukiyo kuyo yonke i-Instagram feed yakho.
I-Instagram yifoto ethandwa kakhulu kunye nevidiyo yokwabelana ngenethiwekhi yoluntu ngenxa yokugxininisa kwi-aesthetics. Nangona i-shimmering shimmering ayisekho kwifashoni, umxholo obonakalayo kwi-Instagram awusoze ulahlekelwe ukubaluleka kwawo.
Ukuba ujonga ngokusondeleyo kumaphepha anabalandeli abamalunga ne-100,000. Gqiba kwii-hashtag ezifanelekileyo oza kuzisebenzisa.
I-hashtag oyisebenzisayo kwi-Instagram ingaba ngumahluko phakathi kwesithuba esiphezulu kunye nesithuba esiphela ezantsi kwoluhlu lwabantu abakulandelayo..
I-100 lezigidi zeefoto kunye neevidiyo zilayishwa yonke imihla. Gxininisa imathiriyeli eveliswa ngumsebenzisi.
Umxholo owenziwe ngumsebenzisi we-Instagram yeyona grail engcwele yokuthengisa. Umxholo udalwe kwaye uvunyiwe yimakethi yakho ekujoliswe kuyo ngaphambi kokuba iphile, ukunciphisa inkcitho yokuthengisa ngelixa kunyuswa ukuzibandakanya kwabathengi.
I-100 lezigidi zeefoto kunye neevidiyo zilayishwa yonke imihla. Jonga iifomathi ezahlukeneyo zevidiyo ezifumanekayo kwi-Instagram ukuze ubone ukuba yintoni esebenza ngcono kwibhrendi yakho..
Ixabiso levidiyo lilodlula kude elo lefoto.
I-100 lezigidi zeefoto kunye neevidiyo zilayishwa yonke imihla. Sebenzisa i-captioning kunye nezixhobo ezivaliweyo ze-captioning kwi-Instagram.
Ngokwe-Instagram, Ama-60% amabali amanyelwa, ngelixa i-40% ibukelwe cwaka.
I-100 lezigidi zeefoto kunye neevidiyo zilayishwa yonke imihla. Iireli ze-Instagram ziya kujikeleza ngasemva ukuba uyakuvumela.
Kubalulekile ukuqonda iifomati ezininzi zentengiso yeqonga, kuba 75% of Instagrammers bathi bathatha inyathelo “kuquka notyelelo lwendawo, yenza uphando kuGoogle okanye uxelele umhlobo wakho” emva kokuchatshazelwa sisithuba.
10. Sebenzisa i-Instagram's augmented real filters kuncedo lwakho.
Isitudiyo se-Instagram sika-Spark AR senza kube lula kuye nabani na ukuba enze izihluzi ezongeziweyo zokwenyani. Ngokujonga ngaphezulu kwebhiliyoni kwezinye zeefilitha ezinkulu ze-Instagram ukusukela ngoko, inyaniso augmented ithathe kakhulu phezu kweqonga.
11. Sebenzisa iintlobo zentengiso yeVidiyo ye-Instagram.
12. Ii-animated GIFs zinokuba mnandi ukuba ziyekwe kwizixhobo zazo.
I-GIF sisixhobo esikhulu samaqela okuthengisa, kuba uphando lubonisa ukuba abathengi banokubukela iividiyo ze-15-yesibini ukuya ekupheleni..
13. Yongeza ukugcwala kwewebhusayithi yakho ngokucofa kwisiseko sabasebenzisi be-Instagram.
Kuba i-Instagram ivumela kuphela ikhonkco elinye elicofayo kwi-bio yakho, inokunceda ukwandisa ithrafikhi kwiwebhusayithi yakho.
14 Unako “ukufumana” kwi-Instagram usebenzisa i-injini yokukhangela (Seo).
I-Instagram kunye ne-SEO isenokungabonakali njengamahlakani endalo ekuqaleni, kodwa kwinethiwekhi yanamhlanje ebukhali ngakumbi, kubalulekile ukuba i-akhawunti yakho ye-Instagram ibe nesicwangciso se-SEO endaweni.
15. Sebenzisa ii-micro-influencers ukuphucula igama leshishini lakho
Enkosi kwintengiso ye-Instagram influencer, kuya kuxhaphaka ngakumbi ukusebenzisa iinkokeli zembono yoshishino ukufikelela kubaphulaphuli ababanzi ngemiyalezo yorhwebo.
16. Nika umvuzo kumntu othatha eyona foto iyilayo ye-Instagram.
Ukhuphiswano yindlela entle yokwandisa ukubandakanyeka kwakho ngokulandelayo kwi-Instagram.
17. I-Instagram ingasetyenziswa njengesixhobo sokuthengisa ukunyusa inani labantu ababhalisela uluhlu lwakho lwe-imeyile.
Xa kuziwa ekwakheni ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi, I-imeyile ihlala iyeyona ndlela ikhethwayo yonxibelelwano. Ukusebenzisa iGajethi ye-Instagram kunokukunceda ukuba ufumane abalandeli abaninzi be-Instagram (isicelo).
18. Sebenzisa amabali e-Instagram.
Ngabasebenzisi bemihla ngemihla abazizigidi ezingama-500, Amabali e-Instagram aphakama ngokukhawuleza ukuya phezulu kwiqonga lokuthandwa. Amabali e-Instagram acinga ukuba ekugqibeleni angathatha indawo yokondla okuphambili.
19. Faka ikhonkco kumabali akho e-Instagram kwiprofayile yakho.
Ngaphambili, ngabasebenzisi be-Instagram abaqinisekisiweyo kuphela abanokongeza ikhonkco ” Xa iposi yakho ye-Instagram ifumana ukuthandwa ngakumbi ” kumabali abo, kodwa ngoku, nabani na oneakhawunti yobuchwephesha kwaye ubuncinci abalandeli be-10,000 bangayenza.
20. Zisebenzise kakuhle iimvakalelo.
IiEmojis, ngokukodwa, ukunika inzuzo phezu konxibelelwano lokubhaliweyo xa isetyenziswa kwi-Instagram. Ngexesha apho iimoticons zininzi (kwaye abaninzi baseza), kubalulekile ukuba ube nesicwangciso sokuzisebenzisa ezibonakalisa ubume beshishini lakho ngaphandle kokuvela nje ngokungaqhelekanga.
21. Yazisa iakhawunti yakho ye-Instagram kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo.
Yazisa isitishi sakho se-Instagram kubantu abaninzi kangangoko. Unokuyifikelela, umzekelo, ngokubandakanya ikhonkco kwiphepha lakho le-Instagram kuhlaziyo lwesimo sikaFacebook.
22. Kulo lonke uxwebhu, sebenzisa iminxeba kwintshukumo (Ctas).
Yenza uninzi lwentengiso yakho ye-Instagram, nokuba ithandwa kakhulu. Faka umnxeba ocacileyo kwisenzo kwi-Instagram.
23. Nika ingqalelo kwezona zithuba ziphawuleka kakhulu ze-Instagram kwaye uthathe amanqaku ngendlela onokuziphucula ngayo.
Yifunde “ifomula” ukwandisa inani labalandeli bakho kwi-Instagram kwaye uyisebenzise kwisicwangciso sakho sokunyusa ukufumana abalandeli abaninzi.
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaguqula ngokulula nayiphi na iakhawunti ye-Instagram